Maaha wax aan caadi ahayn khabiirada suuqgeynta raadinta inay ka wada hadlaan lana wadaagaan xeeladaha loogu talagalay hirgelinta suuqgeynta warbaahinta bulshada oo ah istiraatiijiyad SEO ah. Sida iska cad, inbadan oo ka mid ah taraafikada webka ee markii hore ka bilaabmi jiray matoorada raadinta waxaa hada wada wadaaga bulshada, iyo suuqleyda soo galaysa, ilahaan badan ee taraafikada lama iska indho tiri karo
Laakiin waa fiditaan khayaali ah oo lagu jiidayo suuqgeynta warbaahinta bulshada hoosteeda dalladda istiraatiijiyadda SEO. Waa la siiyay, waxaa jira waxyaabo aad sameyn kartid markaad fulineyso olole suuqgeyn ah oo ku saabsan suuq-geynta warbaahinta bulshada oo saameyn togan ku yeelan doona SEO (tweets calaamadeysan, tusaale ahaan) laakiin suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa aad uga badan kor u qaadista muuqaalka natiijooyinka mashiinka raadinta.
Si aad u noqoto mid cadaalad ah (oo aan u ciyaaro u doodaha shaydaankayga) waxaa jirta faa iido weyn in magacaaga la galiyo qiimeyn badan oo bulsho iyo dib u eegis boggaga sida ugu macquulsan maxaa yeelay waa macquul in marka qof uu raadinayo wax soo saar ama adeeg, tixraacyada ganacsigaaga kuwan goobaha taraafikada ee sareeya waxay ku ridi karaan tartame bogga koowaad. Markay dhacdo, taasi waa guul.
Laakiin guuleysta ama ha guuleysan, waa ciyaar qaldan. Markaad dadka ku dhex gasho suuqgeynta warbaahinta bulshada, waxay horeyba ugu jiraan mashiinkaaga. Hadafku maahan wacyi galin markan. Raadintu waa faa'iido dabada-dheer ah oo kaqeybgalka, laakiin maahan sababta loo sameeyo. Markaad ku hawlan tahay warbaahinta bulshada, waxaad durbaba dhiseysaa kalsooni, barashada baahiyaha iyo xiisaha macaamiishaada, iyo boos u sameynta garoon. Haddii aad diirada saareyso faa'iidooyinka SEO, waxaad daawaneysaa kubad qaldan.
SEO iyo suuqgeynta warbaahinta bulshada waa labadaba howlo muhiim u ah guusha khadka tooska ah waxayna ka shaqeeyaan riwaayad, sida guurka. Laguma biirin sinta. (farshaxanka loo aaneeyey Lee Odden)